Nahazo ny anjarany ny kaominina Mahavelona Foulpointe
Nitsidika ny kaominina Mahavelona Foulpointe, ny alatsinainy faha11 janoary 2016,ny filoha Atoa Hery Rajaonarimampianina miaraka amin’ny minisitra miisa 12 sy ireo manampahefana maro avy Antananarivo sy avy amin’ny faritra Atsinanana. Natolora tamin’izany tamin’ny fomba ofisialy vatsin’akohonana, tetikasa fifanomezan-tanana ifampierana ho fitsinjovana ny sosialy ny ankizy toy ny fahasalamana, ny fampianarana, ny tohana hoan’ireo Ray aman-dReny sahirana.
Fianakavana miisa hatraminy 4000 no nahazo tohana tamin’izany tao Foulpointe ary zaza latsaky 15 sy 15 taona no hisitraka an’izany. Maharitra dimy taona ny faharetany tetikasa ka any amin’ny 2020 ny fataperany. Fivondronana enina avy anaty faritra dimy ihaina no hanatontosana ity tetik’asa “Vatsin’ankohonana” ity.
Ny tetik’asa “Vatsin’ankohonana” dia, tetik’asa haharitra mandritry ny 5 taona, izay ho tanterahina amin’ny Fivondronana 6 izay avy amin’ny Faritra 5 eto Madagascar. Famantsiam-bola mitentina 40 000 000 dolara avy amin’ny banky iraisam-pirenena no ny angady nananana sy vy nahitana nananatanterahana ny titik’asa, FID no manao ny fitantanana rehetra mahakasika izany. Ny tokan-trano tena sahirana ao anaty fiara-monina no tsinjovina amin’izany. Ny tanjona kendrena amin’ity tetik’asa ity dia ny famerenana ireo ankizy nitsoka andaharana an-tsekoly sy ny fanohanana ny zaza amin’ny sakafo aram-pasalamana. Isakiny roa volana no azahoana ny vola, raha ny ao Foulpointe manokana dia amin’ny alalany OTIV no andraisana an’izany.
Misy ny fanaraha-maso ankaiky ireo olona nahazo tohana amin’ny fampiasana izany mba ho misy fiantraikany amin’ireo izay nadray izany.
Nisaotra ny fitodram- panjakana ny mponinana tao Mahavelona Foulpoint, tamin’ny ezaka fanampina ho an’ny mponinana antoerana.
(116) Marcelline VAVIROA : 12-01-2016 - 10:25